Isticmaal Twitter ah ayaa xisaabisay in haweenku u baahan yihiin kaliya XAMARX Xadhigaha wareega wareega - TELES RELAY
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD Isticmaalaha Twitter ayaa xisaabisay in haweenku u baahan yihiin XAMARX XAMBAR oo keliya wareega
Nasiib darro, mawduuca nadaafadda nadaafadda dumarku marar dhif ah ayaa looga hadli doonaa. Dumarku waxay doorbidaan inay raadiyaan jawaabaha internetka, ragga waxay ku dhow yihiin gebi ahaanba inay jaahil yihiin su'aalahan. Tusaale ahaan, user a Twitter ayaa go'aansaday inuu ka faaloodo fikradaha uu ku saabsan xeerarka. Dumarku wakhti badan kuma qaataan faallooyinka iyaga ku jira. Ka fikir waxa dhici doona haddii qof uu aaminay!
Публикация от Др. Elena Berezovsky (@dr_olena_berezovska) 28 May 2018 ee 5: 01 PDT
Fikradda been abuurka ah ee haweeneyda u baahan tahay
Tani waa waxa user ah Twitter ayuu qoray:
Sidaa daraadeed, qiyaasta qiyaasta u dhaxaysa 10-35ml ee dhiiga, buun walba waxay ka kooban tahay 5ml, sidaa daraadeed 7 waxay kufadhiyaan wareeg kasta. Aynu xajinno, tusaale ahaan 10 ... wareegyada 9 sannadkiiba = 90 kufadhiyo max.
Adigoo samaynaya fudud calculWuxuu soo gabagabeynayaa in kharashka sanadka ee bixinta tamponsku uu aad uga badan yahay kharashka dumarka ee frappuccino!
DIB U EEGID MAGAALADA LUUQADAHA 🦄 💕🧚🏼♀️ 💛 👯♀️ (@lunaperiods) 22 MAR 2019 ee 2: 08 PDT
Iyo voivi waxa ay isticmaalaan Twitter-ka
Публикация от MIA Organic (@mia_organic) 22 MAR 2019 ee 1: 01 PDT
Waan ku wareersan yahay meesha uu ku sameeyay xisaabta tan 😂 Sida ... hal bil = 9 ????
- Gecko Dad 🦎 (@SarahGonzo18) March 6, 2019
Waan jahwareeray sida uu u maamulay xisaabtarkan 🙂 Abaabulka ... hal bil halkii = 9 ????
Uhmmm helloooo qof kastaa wuu ogyahay muddooyinka wakhtiga jiilaalka pic.twitter.com/FzjrtMSjEG
- San Holo (@beeeperez) March 6, 2019
Uhmmm helloooo qof kastaa wuu ogyahay in xeerarku aanu jirin jiilaalka.
Soo-saarista dambi-baarista (@crimson_collective) 18 MAR 2019 ee 8: 11 PDT
Intaa ka badan xaqiiqda madadaalada ah ee ah haddii aad u tagto mudo dheeri ah waxaad yeelan kartaa cudurka Toksxic Shock Syndrome (TSS). Taas ayaa ku dili karta.
- Bethany NowIWantASnowcone Simonsen (@Bethanyrambles) March 7, 2019
Waxyaabaha qosolka ah waa in haddii aad ka tagto suufka aad u dheer aad u fidi karto Toksik Shock Syndrome (TSS), oo ku dili kara.
Dhamaanba waan isku wareersanahay. 7 waxay kufadhiyaan wareeg kasta? 9 mudo sanad ah? Meelaha jilicsan ee casiirka ah? Ninkan miyuu xitaa gabadh gelinayaa?
- Ruthieo 🎀 (@Roofus890) March 4, 2019
Ma ahan wax caadi ah. 7 waxay kufadhiyaan wareeg kasta? 9 wareegga caadada sanadka? Ilmo yar oo jilicsan! Ninkan ma la kulmay haweeney?
Xeerarka nadaafadda dumarka
Beddel tampons ugu yaraan saacadaha 4-8. Ha ka ilaalin saacado ka badan 8 si isku mid ah looga hortago cudurka argagaxa leh. Kristina Makris, oo ah farshaxan qurxin, ayaa toddobaadyadii XNUM ku xannaaneynayay daryeel culus sababtoo ah tampon. Waxay luminaysaa nabar ama xitaa nolosha sababtoo ah SCT. Marka la eego warbixinta meydka, tamboonku wuxuu dilay sanado yar oo 2 ah oo Canadian ah.
Публикация от Callaly (@mycallaly) 23 MAR 2019 ee 9: 40 PDT
Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan nadaafadda iyo caafimaadka, hubso inaad waydiiso dhakhtarkaaga haweenka muddada baaritaankaaga!